Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 ọnwa 2 izu gara aga #1816
Ndewo Ndi Pilot! Ndo ma oburu na ajuru nke a. Achọrọ m otu awa na ọkara ma gbagote n'efu.
Enwetabeghị m ma wụnye faịlụ ụgbọ elu ma ọ bụ ebe nkiri. Kpebiri iji nwaa Boeing 737-MAX8 FSX & P3D. Enwere m FSX. Windows 10. Ebudatarala faịlụ ahụ. Gịnị ka m na-eme ugbu a? Ọ nwere peeji nke nwere ntuziaka nwụnye wdg?
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 ọnwa 2 izu gara aga #1817
Naanị soro ihe ọ na-ekwu, n'elu eriri kwakọba ya ma ọ ga-abịa ebe ọ kwuru ebe ị ga - enweta ya ọ ga - echekwa ya na akpaghị aka.
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 ọnwa 2 izu gara aga #1820
Nnukwu ndị Pilot - ebudatala ma wụnye B737 Max 8 n'enweghị nsogbu. Agbanyeghị mgbe m malitere FSX Mpempe akwụkwọ Steam na Fly Inside VR, ọ nweghị onye n'ime ụgbọ elu m nwere injin ha na-agba. M wee nwalee mmalite ntuziaka na injin ndị ahụ anaghị agafe. Amalitere m injin ndị na-eji Ctrl E, otu ihe. Ha rankụọ mmanya ma ha agaghị agabiga. N’akụkụ, mgbe m meghere FXS SE na-enweghị Fly Inside, injin ụgbọ elu na-amalite n’enweghị okwu ọ bụla. Enweghị m nsogbu ruo mgbe ebudatara Max 8. Enwere onye ọ bụla nyere aka karịa iwepu ụgbọ elu a mara mma?
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 ọnwa 2 izu gara aga #1821
M bụ onye ihere ịzaghachi n'okwu nke m mana maka ụfọdụ amaghị ama, mgbe m ga-ebido FSX ụgbọ elu m niile enweghị mmanụ ọkụ! Nke ahụ bụ okwu! Felite em tupu ị gawa! Nwee ezigbo ụbọchị ma debe ikuku n'okpuru nku gị
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 ọnwa 2 izu gara aga #1822
Tried nwara ịkwụsị ụgbọ elu ahụ na-echekwa ya na mmanụ zuru oke ma maliteghachị?
Ndumodu ikpe azu: site TH1Flyer.
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 ọnwa 4 ụbọchị ago #1842
Ndewo Guys, Mpempe akwụkwọ, enwetara m oge m ga-ebido na max737-800.M jide n’aka na edobere wiil ahụ ka ọ dị n’etiti 2-3 degress.Dị nke a bụ v / kọọpị site na ntinye akwụkwọ ntuziaka.
N'ihi na ọ gaghị apụ na V1or Vr .Họgharịa enyemaka a ụfọdụ.
Cheers Jim Beale "Ego buru ibu"
Oge ike page: 0.296 sekọnd